ब्लूज जीन्स। द क्याम्प | का लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, युवा साहित्य
फोटोग्राफी: निलो जीन्स। फेसबुक पृष्ठ।
नीलो जिन्स, सेभिलियन लेखकको छद्म नाम फ्रान्सिस्को डे पाउला फर्नांडीज, यसको प्रशस्त, सफल र पहिले नै नयाँ उपन्यास छ लामो प्रक्षेप विशेष गरी किशोर साहित्यमा। यसको शीर्षक शिविर र यो एक हो रोमाञ्चक जसमा ऊ रहस्यको स्पर्शको साथ हिम्मत गर्दछ र मृत्युको वरिपरि अनौठो परिस्थितिमा शिविरमा भएको थियो जुन धेरै विविध उत्पत्तिबाट आएका युवाहरूसँग आएका थिए। यसमा साक्षात्कार हामीलाई यसको बारेमा बताउँछ र अरू धेरै। म तपाईंको समय र दयालु व्यवहारको कदर गर्छु.
निलो जीन्स - साक्षात्कार
साहित्य वर्तमान: शिविर यो तपाईंको नयाँ उपन्यास हो, जहाँ तपाईं आफ्ना अघिल्ला पुस्तकहरूको थिमबाट टाढा जानुभएको छ। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनुहुन्छ र विचार कहाँबाट आयो?
बीजे: मलाई लाग्दैन कि मैले त्यो टाढा पुगेको छु। के हुन्छ अब मुख्य भाग रहस्यमा समर्पित छ, तर अझै पनी यो जस्तै ब्लू जीन्स स्ट्याम्प रहेको छ। यो एक युवा थ्रिलर हो जुन मेरो पार्टनर र ममा बन्दीपूर्ण रहेको कुराकानीबाट उत्पन्न हुन्छ। उनलाई यो भयो कि उनी क्याम्पमा सेलफोन बिना र इन्टरनेट जडान बिना केही केटाहरूलाई अलग गर्न सक्छिन् र त्यहाँबाट मैले कथा सिर्जना गरें।
बीजे: मलाई इमान्दारता याद छैन। सानो छँदा म धेरै पढ्छु किनकि मेरा आमा बुबा दुबै धेरै पाठक हुनुहुन्छ र म सँधै किताबले घेरिएको छु। सायद मेरो पहिलो लिखित कथा एक छोटो कथा थियो जसमा एक व्यक्ति थिएटर प्रदर्शनमा मर्दछ, र अन्तमा यो पत्ता लगाइन्छ कि हत्यारा म हुँ (वा त्यस्तै केही)। जे होस् मलाई पहिलो चीज याद छ त्यो हाँसोको बारेमा एक निबन्ध हो जुन उनीहरूले मलाई कक्षामा पठाए।
बीज: अगाथा क्रिस्टी मेरो मात्र सन्दर्भ हो। मैले उनीबारे सबै कुरा पढेको छु। मसँग धेरै हेडर लेखकहरू छैनन्। कार्लोस रुइज Zafón, Tolkien, जुलियो भेर्न... मैले यसका बारे सबै कुरा पढेको छु डोलोरेस रेन्डोन्डो o जोन अर्सन, उदाहरणका लागि।
बीजे: हुन सक्छ Poirot वा शर्लकमा होम्स। मलाई बुद्धिमान र डिडक्टिव चरित्र मन पर्छ।
बीजे: म महामारी नपुगुञ्जेल कफी पसलमा लेख्ने गर्थें। म लेख्न चुप लाग्न सक्दिन र, यसको विपरित, पढ्नको लागि हल्का हल्ला पनि छैन। जे होस् मँ एक चीज वा अर्कोको लागी ठूलो शौक छैन।
बीजे: मेरा सबै उपन्यासहरू बाहेक शिविर, मैले तिनीहरूलाई लेखेको छु घर बाट टाढा। मलाई मन पर्छ हल्ला संग लेख्नुहोस्मान्छेहरु आउँछन् र जान्छन्। म किन व्याख्या गर्न सक्दिन, किनकि म आफैंलाई चिन्दिन। कफि पसलहरू मेरो अफिस बने। गर्नको लागि ली म हुन रुचाउँछु शान्त घरमा सोफा वा ओछ्यानमा।
बीज: यो समय द्वारा जान्छ। उपन्यास नीगरा, the थ्रिलरहरू, the रहस्य… के म सामान्यतया पढ्छु हो। तर मँ धेरै पढ्छु ऐतिहासिक उपन्यास यस समयमा र म उत्कृष्ट युवा उपन्यासहरूसँग अपडेट रहन कोशिस गर्दछु, युवा मानिसहरूले के पढ्छन् र मेरो साथीहरूले के गर्छन् भनेर सूचित गर्न।
बीजे: म एकमा छु पाठक रोक्नुहोस् अहिले। मसँग धेरै पेन्डिंग उपन्यासहरू छन् मध्यरातमामाइकल सान्टियागो द्वारा, ढोका, Manel Loureiro द्वारा वा आत्माको खेल Javier Castillo द्वारा। म लेखिरहेको छैनयद्यपि मलाई लाग्दैन कि यसले मलाई कम्प्युटरको अगाडि बस्न र नयाँ कथा खोज्न लामो समय लिन सक्दछ।
बीजे: प्रकाशकहरू कोरोनाभाइरस स from्कटबाट मुक्त भईरहेका छन् र मलाई लाग्छ कि उनीहरूले अपेक्षित पीडा भोगेका छैनन्, यद्यपि यो स्पष्ट छ कि सबै क्षेत्रहरूमा गाह्रो समय थियो। यो एक जटिल र अल्पकालिक संसार हो, त्यसैले यसमा धेरै समय समर्पित गर्न तपाईंले यसलाई वर्षको 365 XNUMX दिनहरू दिनुपर्दछ। कम से कम त्यो म के गर्छु। यो प्राप्त गर्नु अघि, मैले पोष्ट गर्ने प्रयास गरें र मैले यो पहिलो पटक पाइनवास्तवमा, सबै प्रकाशकहरूले मलाई अस्वीकार गरे। तर मैले हार मानिन, मैले देखें कि सामाजिक नेटवर्कहरू र इन्टरनेट एक राम्रो उपकरण र राम्रो प्रदर्शन हुन सक्छ पाठकहरू र समुदायमा धन्यवाद जुन मैले नेटवर्कमा बनाएको छु धन्यवाद जुन मैले प्रकाशित गर्न सक्षम गरें। पाउलाका लागि गीतहरू। यसलाई बाह्र बर्ष भयो, चौध उपन्यास बजार मा, यद्यपि मैले अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ।
बीजे: धेरै गाह्रो। मलाई लाग्दैन कि महामारी, भाइरस र के भइरहेको छ केहि सकारात्मक छ। यो स्पष्ट छ, ढिलो वा चाँडो, यी सबै श्रृंखला, पुस्तक र चलचित्रहरूमा देखा पर्नेछ। हामी आशा गर्छौं कि हामी मान्छेहरु संग मिल्दैनौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » नीलो जिन्स। शिविरका लेखकसँग अन्तर्वार्ता